ရောင်းမည်ထူးခြားတဲ့နေအိမ် - Worldwide မှပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်များ | အထူးတွေ့ရှိချက်များ
Brenda Thompson က - အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အိမ်ခြံမြေပွဲစား
ရောင်းမည်ထူးခြားတဲ့ Properties ကို
Cabins & တောအိမ်များ Log
Self-suffuff, Prepper နှင့် Off-Grid အိမ်များ
ပုံမှန်မဟုတ်သောဇိမ်ခံကား Properties ကို
ထူးခြားတဲ့မော်ဒန် / အမျိုးစုံရနေအိမ်
ထူးခြားတဲ့ Waterfront နေအိမ်
ရောင်းမည်သည်အခြားပုံမှန်မဟုတ်သော Properties ကို
ရောင်းမည် UNIQUE အိမ်
ထူးခြားသောအိမ် ၀ ယ် ၀ ယ်သူ ၅၃၀၀၀ ကျော်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်လိုသည်
$ 40 / လ
Brenda! ဒါကလှတယ်! မင်းရဲ့အလုပ်နဲ့အသေးစိတ်အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောအပြင်အဆင်နှင့်ပုံစံချခြင်း။ ဤအရာသည်ငါမျှော်မှန်းထားသည်ထက် ကျော်လွန်၍ ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! မင်းရဲ့ဆိုဒ်ကတကယ့်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝယ်လက်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်။ ကောင်းချီးတစ်ခုပဲ။
Beth P (ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းရန်)
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ Brenda၊ ငါတို့အိမ်ကိုရောင်းပြီးပြီ။ အပြည့်အ ၀ စျေးနှုန်းငွေသားသည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှဆက်စပ်မှုမရှိချေ။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ငါမင်းကိုမပြောနိုင်ဘူး။ မင်းလုပ်ခဲ့တာအားလုံးကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။ မင်းရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုဒ်ကိုငါအသေအချာအကြံပေးလိမ့်မယ်။
Patricia E. (ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းရန်)
ချစ်ခင်ရပါသော Brenda၊ သင်သည်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သွားပြီ။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေကိုအရမ်းအထင်ကြီးတယ် ...
Elizabeth S (ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းရန်)
တကယ့်ကိုခမ်းနားတဲ့ကြော်ငြာပါ - Wow! Brenda၊ မင်းရဲ့ wizardry အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်းရဲ့အကူအညီအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဖော်ပြချက်သည်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများစွာကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည် လူတော်တော်များများကအဲဒါကိုမြင်ပြီး ၂၀၀၀ ကျပ်နဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးထက်ပိုရောင်းတာပေါ့။ ငါနေဆဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပါပြီ။ ငါမင်းရဲ့ဖော်ပြချက်ကအထက်ကတောင်းခဲ့တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရဖို့ကူညီခဲ့တယ်
လှတယ် သင်ကစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းသဘောကျမိပါတယ် ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်သငျသညျအလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ ငါပိုပြီးကျေနပ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူး
ငါလမ်းတစ်လျှောက်သင်ထောက်ပံ့အားလုံးနှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်သင့်ကိုအလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ အကယ်၍ သင့်အတွက်မဟုတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအထိရောက်ရှိနိုင်မည်ကိုမသိပါ။ ငါ့ကိုစောစောစီးစီးငါ့ကိုအားပေးတယ်။ ငါခေါ်တိုင်းမင်းကမင်းကိုဖြေပါ့မယ်။ ဒါကငါ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုဆိုလိုတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!! သငျသညျမာစတာ Marketer ဖြစ်ကြသည်။ တုန့်ပြန်ချက်ချင်းပဲ! Brenda ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသင်တန်းကိုသင်လုပ်လိမ့်မည်။ ငါကျိန်းသေပထမ ဦး ဆုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Patsy N (Keller Williams ပွဲစား)
Brenda၊ စာရင်း၏ဖော်ပြချက်တွင် သင်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - မင်းအတွက် "ယုံကြည်ချက်"ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်အားထက်သန်မှု။
N. Kuhn နှင့်မိသားစု (ပိုင်ရှင်မှရောင်းမည်)
တကယ်တော့သင်ဟာကျွမ်းကျင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဂရုစိုက်မှုစတဲ့တောက်ပတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်လိုထင်ရှားနေတယ်။ ငါသည်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်မှတဆင့်အိမ်မှတဆင့်ရောင်းဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်!
Fran G (ပိုင်ရှင်မှရောင်းမည်)
မင်းရဲ့စာမျက်နှာတွေကိုဘယ်လိုအတူတူထားတယ်ဆိုတာကိုပဲငါသဘောကျတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ဖတ်ပြီးခံစားရန်နှင့်အချက်များကိုရယူရန်အချိန်ယူသည်။ ဒါကအရမ်းရှားတယ်၊ မင်းကိုရတာကောင်းတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ~
Faith L (Keller Williams အေးဂျင့်)
Meg L. (အက်ဒီနာ Realty ကိုယ်စားလှယ်)
Guy L. (ပိုင်ရှင်ရောင်းရန်)
ဂျူလီ D. (Keller Williams)
သင်တို့နှင့်အတူစာရင်းပြုစုခြင်းအပေါ်သင်တို့၏ဂရုပြုမှုကို appreciate အမှန်ပင်ကျွန်ုပ် certainly ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Angela B (ပိုင်ရှင်မှရောင်းမည်)
Faith L. (Keller Williams အေးဂျင့်)
Dustin B (အေးဂျင့်)
ဝိုး! ငါရလဒ်များကိုနှင့်အတူသဘောကျမိပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုသောကြာနေ့တွင်ပိတ်ရန်ရှိသည်။ you သင်လုပ်သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောတာကငါ့ကိုကူညီပေးတယ်။ အရမ်းခက်တယ်
Bethany M (ပိုင်ရှင်ရောင်းရန်)
မင်းဘာကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားလုပ်မယ်လို့မင်းဘယ်တုန်းကမှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး အဲဒါကျွန်တော့်အတွက်ကုန်ကျပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။
ဟိုင်းငါ Brenda ငါ ငါတို့သိတယ် ငါတို့အိမ်၌ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်! အိမ်ခြံမြေကိုကမ္ဘာသို့ရောင်းရန်ကြိုးစားသည့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Brenda ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ဝမ်းသာပါတယ်ငါသည်သင်တို့၏ website ကိုဖြတ်ပြီးလာ။ ,
စိန့်ဂျိုးဇက်၊ မစ်ဆိုရီ 64507
တောင်ပိုင်း Black Hills မှတ်တမ်းအိမ်
805 S ကို 11th စိန့်
ရေပူစမ်း၊ တောင်ဒါကိုတာ ၅၇၇၄၇
4 အပြည့်အဝ, 1 တစ်ဝက်ရေချိုးခန်း
300 Snowberry လမ်း
Roseburg၊ အော်ရီဂွန် ၉၇၄၇၁
Off-Grid Mountaintop အိမ်ခြံမြေ
986 Chumley Mountain Rd၊
Speedwell၊ Tennessee ၃၇၈၇၀
Vermont ရှိ Hobbit အိမ်။
43 မြောက် St.
Middletown Springs၊ Vermont 05757
Yulan၊ နယူးယောက် ၁၂၇၉၂
113 ဘုရားကျောင်း St
Logan, Kansas ၆
1643 ပြည်နယ် Rt 46
3 အပြည့်အဝ, 1 တစ်ဝက်ရေချိုးခန်း
Atlanta မြို့လယ်ရှိ Unicorn အိမ်
အတ္တလန်တာ၊ ဂျော်ဂျီယာ 30317
5595 အမေရိကန်အဝေးပြေး 278
Westernville, နယူးယောက် 13486
2 အပြည့်အဝ, 1 တစ်ဝက်ရေချိုးခန်း
ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြော်ငြာပါ - ဒေါ်လာ ၁၄ / လ
ယခုသင်သည်သင်၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၄.၀၀ ဖြင့်တင်နိုင်သည်။
အထူးရှာဖွေမှုများသည်ထူးခြားသောစတိုင်ဖြင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသည်။ သင်ပုံမှန်မဟုတ်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းလိုလျှင်ဤနေရာတွင်စာရင်းနှင့်အပြည့်အ ၀ ရောင်းချလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်သင်ဝယ်လိုပါကသင်စိတ်ဝင်စားသောအိမ်ခြံမြေပုံစံကိုနှိပ်ပါ။
အထူး“ ရှာဖွေမှုများ” - အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစားအလိုက်ရောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအိမ်များကိုရှာဖွေပါ
အဘယ်ကြောင့်ငါအထူး start ခဲ့ဘူး "ရှာပြီး ... "?
အထူး“ Finds …” ၏စိတ်ကူးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများမှ ၀ ယ်သူအဖြစ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးရောင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့် - အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်.
မင်းလိုပဲငါဟာရောင်းဖို့ထူးခြားတဲ့အိမ်များစွာပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ရိုးရာအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသောအိမ်ခြံမြေကိုရှာဖွေနေသည်ကိုနားမလည်သောကြောင့်စိတ်ပျက်မိသဖြင့်သူတို့သည်သူတို့၏ MLS ၏ကျဉ်းမြောင်းသောနယ်နိမိတ်အတွင်းသင့်လျော်သောစံနှင့်သာမန်အိမ်ခြံမြေများကိုပြသခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ထူးခြားသောအိမ်များကိုရောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါရိုးရာကုမ္ပဏီများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုဈေးကွက်တင်ရန်ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုနယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည် ယင်းသည်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အိမ်ခြံမြေလိုင်စင်နှင့် voila တို့ဖြစ်သည်။ အထူး "Finds ... " မွေးဖွားခဲ့သည်!
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းရန်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်များနှင့်ထူးခြားသောအိမ်များကိုရောင်း ၀ ယ်သည်။
သင့်ကိုကူညီပါ ဦး ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်များအတွက်ကြော်ငြာအေဂျင်စီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောအိမ်များကိုရောင်းခြင်းတွင်မြှုပ်နှံခြင်းခံရသည်။
Biophilic ဒီဇိုင်း - ၎င်းကိုသင်၏အိမ်ထဲသို့ထည့်ခြင်း
" ... ကိုရှာပါ" သင်၏အထူးအဘို့အရှာဖွေရေးရိုးရှင်း
မူပိုင် All Rights Reserved © 2016